Shiinaha Qaab soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Meesha
Qaab samaynta (Dhimashada samaynta) waa habka loo soo saaro qaybaha sida ku xusan sawirka naqshadeynta caaryada, iyadoo la adeegsanayo goynta farsamada, mashiinka dhimbiilka, daaweynta dusha sare iyo daaweynta kuleylka, ugu dambeyntiina isku uruurinta dhammaan qeybaha sida caarada loo sawiray.
Qaab samaynta & wax soosaarku waa warshad aad muhiim ugu ah wax soo saarka casriga ah. Waxay siisaa qalab muhiim u ah habka wax-soo-saarka ballaaran, wax-ku-oolnimada sare iyo wax soo saarka warshadaha oo tayo sare leh.
Waa maxay caaryada?
Caaryada (caaryada, dhinta) waxaa loo yaqaan "hooyada warshadaha", taas oo ah qalab hawleed muhiim ah si loo gaaro saxnaan sare, waxqabad sare iyo wax soo saar ballaaran oo warshadaha wax soo saarka casriga ah. In wax soo saarka ee warshadaha caaryada, wasakhahaasi iyo qalab kala duwan ayaa loo isticmaalaa si loo helo alaabada loo baahan yahay oo la isku duro, wax taaj oo kale afuufka, extrusion, shubay caaryada ama been abuurtay, dhalaalida, shaabado iyo habab kale. Marka la soo koobo, caaryadu waa aalad loo isticmaalo sameynta walxaha wax lagu shubo. Qalabkani wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan, iyo qaabab kala duwan ayaa ka kooban qaybo kala duwan. Waxay inta badan ogaataa ka shaqeynta qaabka shayga iyadoo la beddelayo xaaladda jireed ee walxaha sameysmaya. Waxaa loo yaqaan "hooyada warshadaha".
Waa maxay wax soo saarka caaryada?
Ku dhowaad dhammaan caaryada ayaa ka sameysan bir, 90% ka mid ahna waxay ka sameysan yihiin bir.
Ficilka xoogga dibedda, biilka biraha wuxuu noqdaa aalad wax soo saar leh qaab iyo cabir gaar ah. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa shaambadda, foornada caaryada, ciladaha qabow, xoqida, qaybaha birta ee birta oo riixaya, tuurista cadaadiska, iyo sidoo kale caaga injineernimada, caagga, dhoobada iyo alaabada kale ee isku xoqida ama wax isku duro. Caaryadu waxay leedahay qaab-hawleed gaar ah ama qaab dalool gudaha ah, marankuna waa loo kala-sooci karaa iyadoo loo eegayo qaabka qaab-dhismeedka (blanking) iyadoo la adeegsanayo qaabka dusha sare ee geeska. Qaabka daloolka gudaha ayaa loo isticmaali karaa si loo helo qaabka saddexda-cabbir ee u dhigma ee biilka. Caaryada guud ahaan waxaa ku jira laba qaybood: caaryada la dhaqaajin karo iyo caaryada go'an (ama feer iyo caaryada gogosha leh), oo la kala saari karo oo la isku dari karo. Marka qaybaha la kala saaro, meelaha banaan ayaa lagu mudaa godka caaryada si ay u sameysmaan markay xirnaanayaan. Caaryadu waa aalad sax ah oo leh qaab isku dhafan isla markaana xambaarsan xoogga bulletka ee billet-ka. Waxay leedahay shuruudo sare oo ku saabsan xoogga dhismaha, qallafsanaanta, adkaanshaha dusha sare, qallooc dusha iyo saxsanaanta waxqabadka. Heerka horumarinta wax soo saarka caaryada waa mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee heerka wax soo saarka farsamada.
Nidaamka wax soo saarka caaryada waxaa ka mid ah: qaabeynta caaryada, ka shaqeynta caaryada, kormeerka caaryada iyo tallaalka tijaabada, wax ka beddelka caaryada iyo dayactirka, iyo dayactirka caaryada.
Waxsoosaarka waxsoosaarka caaryada waxaa badanaa lagu gartaa been abuur, goynta, kuleylka iyo isku imaatinka iyo habab kale. Si loo hubiyo tayada wax soo saarka ee caaryada oo loo yareeyo kharashka wax soo saarka, maaddada waa inay lahaato malleability wanaagsan, goynta machinability, qallafsanaanta iyo gariirka, iyo sidoo kale waa in ay leeyihiin qayilo yar, xasaasiyadda decarbonization iyo daminta u janjeedha dilitaanka cilladaha. Goynta waxay qaadataa 70% culeyska shaqada ee habka caaryada. Tallaabada ugu muhiimsan waa in la helo daloolka buuxiya shuruudaha qaabka, saxnaanta cabbirka iyo tayada dusha, iyo sidoo kale dhammaan farsamooyinka.
Nidaamka sameynta caaryada
Maranka birta ah ee sameynta caaryada ayaa la duubay oo lagu sameeyay warshadda birta, warshadda caaryada ayaa si toos ah u dooran karta inay iibsato. Samaynta caaryadu waa inay ka dhigto meelahan birta ah wasakhooyin soo saari kara wax soo saar badan. Soo-saarista caaryada waxaa ka mid ah naqshadeynta caaryada, farsameynta iyo isku-xirnaanta udub-dhexaadka caaryada iyo saldhigga caaryada.
1. Naqshadeynta caaryada waxaa dhameystirey injineero xirfad leh. Naqshadeynta caaryadu waa heerka iyo aasaaska wax soo saarka caaryada oo dhan. Marka loo eego shuruudaha qaab dhismeedka sheyga iyo saxnaanta dusha cabbirka, munaasabadaha codsiga iyo soosaarka la filayo, iyo sidoo kale qaabeynta mashiinka wax lagu duro ee duritaanka, injineerku waa inuu si macquul ah u xusho birta qayb kasta oo caaryada ka mid ah oo uu go'aamiyo qaab dhismeedka iyo habka caaryada. Caqli galnimada naqshadeynta caaryada ayaa go'aamisa dhibaatada soo saarista, qiimaha, nolosha adeegga, wax soo saarka iyo tayada wax soo saarka caaryada.
Caaryadu waa nooc qalab qaali ah. Naqshadeynta, injineeradeenu waxay adeegsadaan softiweer si ay u falanqeeyaan iskuna ekeysiiyaan qeybinnada qeybaha, wadada socodka, barta cirbadeynta iyo xitaa dhismaha qeybaha.
2. Mashiinka caaryada. Waxyaabaha wax lagu shubo waxaa lagu farsameeyaa qalabka mashiinka iyadoo la raacayo naqshadaha iyo dukumintiyada nidaamka injineernimada. Guud ahaan, qalabka mashiinka wax lagu jaro iyo qalabka loo isticmaalo samaynta wasakhda waxaa ka mid ah CNC, EDM, WEDM, lathe, Furimaha, mashiinka wax lagu nadiifiyo, iwm. Qalabka mashiinka horumarsan iyo midka saxda ah wuxuu si weyn u wanaajin karaa saxnaanta caaryada, soo gaabin karaa wareegga wax soosaarka isla markaana yareyn karaa qiimaha. Noocyada kala duwan ee wasakhda waxay adeegsadaan isku-dhafnaan kala duwan oo ah qalabka mashiinka: wasakhda cirbadeynta iyo wasakhda dhinta-tuurista inta badan waxay adeegsataa CNC, EDM iyo WEDM. Wasakhda shaabad ku samaysanta iyo wasakhaha soo baxa ayaa badanaa isticmaala CNC iyo WEDM
3. Isku duubnaanta caaryada. Isku soo wada duub caaryada waxay kuxirantahay farsamayaqaanada. Waxaa ka mid ah udub dhexaadka dhinta, boodhka istiraatiijiga ah, boostada hagista, farsamada ejection, iswaafajinta inta udhaxeysa geerida dhinta iyo mootada, isku imaatinka orodyahanka kulul, iyo sidoo kale qeybta aan la goyn karin, iyo kulanka guud ee ugu dambeeya. Marka ay sare u kacdo saxsanaanta mashiinka, ayaa yaraanaya culeyska shaqada ee isku imaatinka dhinta, waxa gaagaaban wareegga waxsoosaarka iyo hoos u dhaca qiimaha. Ka dib dhammeystirka kulanka dhimashada, waxaa lagama maarmaan ah in la tijaabiyo, la hubiyo, la saxayo lana hagaajiyo dhimashadda illaa inta ay soo saari karto alaab tayo leh oo leh tiro kale.
Habka samaynta caaryada caadiga ah
Mashiinka Dheecaanka EDM-Korantada
WEDM-silig goynta koronto
Habeynta iyo isu-ururinta wasakhda
Shirkadda Mestech waxay inta badan ku hawlan tahay wax soo saarka caaryada caagga ah iyo cirbadeynta wax soo saarka, iyo sidoo kale wasakhahaasi qalabka (biraha dhinta-tuurista dhinta, shaabbada dhinta) waxsoosaarka iyo soo saarista qaybaha biraha.
Hore: Naqshadeynta caaryada
Xiga: Sida loo qaabeeyo qaybo caag ah
Caaryo caag ah oo loogu talagalay mashiinka saarista timaha laser